Ogaden News Agency (ONA) – Afrika Qaarad Lakala Xod-xodanayo oo Macdanta Hodan ku ah iyo Suuq aan la Sahmin
Afrika Qaarad Lakala Xod-xodanayo oo Macdanta Hodan ku ah iyo Suuq aan la Sahmin
Shirarka lala galayo Madaxda Afrika ayaa noqday moodo: Bishii August ayuu Madaxweynaha Mareykanka qabtay Shir Madaxeedkii 1aad ee Afrika uu la galo; Bishii April, Midowga Yurub ayaa Shirkii 4raad kula galay Madaxda Afrika Brussels, dalalka laisku yidhaahdo BRICS oo ka kooban Brazil, Russia, India, China iyo South Africa ayaa iyaguna shir kula galay madaxda Afrika magaalada Durban bishii March ee sanadkii tagay. Sidoo kale Jaban ayaa June 2013 martigaliyay Shirkii 5aad ee Shirka Horumarinta Afrika oo ka dhacay magaalada Yokohama. Sanadka soo socda waxaa laqaban doonaa shirkii 6aad ee Shiinaha iyo Afrika. Dawladaha Koonfur Amerika, South Korea iyo Turkey ayaa balansaday inay shirar kale la galaan madaxda Afrika.
Madaxdii Afrika waxaa ku filaan la’ waqtigii shirarka oo waxay noqotay inay shir-sanadeedkaa qaaradaha iyo shirarka Afrika ee dhexdooda ah ay dayaarad usii saarnaadaan. Hadaba ma la odhan karaa waxaa bilaabatay waqtigii Afrika losoo jeedsanayay, ama waxaa lagu arkay qaarada wax aan laga helin qaaradaha kale oo ah cadadkooda oo badanaya iyo khayraadka dabiiciga ah ee xad-dhaafka ah.
japan oo ugu horeysay inay madaxweynayaasha Afrika la shirto 1993gii, inkastoo waagaa ay u yimaadeen afar madaxweyne oo kali ah, wuxuu ku saabsanaa sidii labada dhan ay u horumarin lahayeen tijaarada dhexdooda ah, Japan iyo dalalka Afrika.
Waxaa ku xigay Shiinaha iyo Midowga Yurub oo Shir u qabtay Madaxda Afrika 2000. Shiinaha waxay qabanayeen 3exdii sanaba mar iyadoo marna lagu qabanayay caasimada Shiinaha marna dal kamid ah dalalka Afrika. Waxaa aad kor ugu kacay alaabta qaydhiin ee Shiinaha uu Afrika kasoo qaato oo halkay ka ahayd 5-milyaar oo Doolar 2001kii uu gaadhay 110-milyaar oo Doolar 2012kii. Qaar ayaa u arka in xidhiidhka sii kordhaya ee u dhexeeya Shiinaha iyo Afrika inay ay wax ka badashay miisaanka xidhiidhkii u dhexeeyay dalalka Afrika iyo kuwii soo gumaysan jiray, meesha ay qaar kale leeyihiin Shiinaha waxay u dhaqmayaan un sida dalalka Yurub. Labada dhanba Afrika waxay ka dhigteen meel alaabta qaydhiin laga dal-dasho, loona dhuufiyo wax soo saarka warshadaha. Farqiga u dhexeeya labadoodana uu yahay un Shiinaha oon faraha la galin arimaha siyaasadda ee dalalka Afrika isla markaana aan kala hadlin xukuumadaha Afrika siday u wanaajin lahaayeen maamulkooda dawladnimo iyo xuquuqda aadanaha.
Waxaad moodaa inay hadda arintaasi isbadal ku dhacayo oo Shiinaha oo ogaaday in xasilooni darada siyaasadeed aanay dan u ahayn baayac-mushtarkooda. Marka la fiiriyo Suudaan iyo Koonfur Suudaan, Shiinaha wuxuu aad ugu dadaalayaa inuu ka dhalioyo xal siyaasi ah. Sidoo kale Zambiya iyo Zimbaabwe waxay ka feejigan yihiin isbadalada siyaasiga ah ee ka socda halkaa. Waxaa la odhan karaa Shiinaha hadda waxay ka mid yihiin dawladaha sida aadka ah u danaynaya arimaha Afrika.
Midowga Yurub ayaa xidhiidhka ugu badan la leh dawladaha Afrika taasoo xidid ku leh xidhiidhkii duuga ahaa ee gumaysiga oo hadheeyay taariikhda labada dhan. Inkastoo shirarka labada dhan uu midkii ugu horeeya dhacay sanadkii 2000, hadana ma’ahayn shir mudaysan oo si joogta ah u dhaca. Todoba sano ka dib ayaa la qabtay midkii ku xigay. Shirkii sanadkan la qabtay ayaa ahaa mid mudnaan lahaa, waxaana ka soo qaybgalay madaxda 40 dal oo Afrika ah iyo 20 dal oo Yurub ah. Xidhiidhka dhaqaale ee labada dhan ayaa sii kobcaya, inkastoo aan xawli ku soconin, hadana Midowga Yurub ayaa ah dalalka ugu badan ee xidhiidhka dhaqaale la leh Afrika. Sanadkii 2011, Yurub ayaa ugu yaraan kala badh bixinaysay dhaqaalaha horumarineed ee Afrika la siiyo oo gaadhayay ilaa 200 billion oo Yuuro. Is-dhaafsiga ganasi ayaa sidoo kale sii kobcay.
Xidhiidhka ciidan eek a dhexeeya labada garab ayaa sidoo kale sii kordhay. Arintaasoo ka timid khatarta argagixiska caalamka. Madaxweynaha Ghana ayaa yidhi haduu gobanayo guriga agtaada ah waa inaad ka qayb-qaadato sidii loo damin lahaa. Midowga Yurub ayaa noqday dalalka siiya maalgalinta ugu badan ciidamada Afrika iyo tababarkooda. Mareykanka ayaa soo raaca oo bixiya taageerada ugu badan ee lasiiyo ciidamada Afrika am aka hortagga Kooxaha Argagixinta.
Dawladda Mareykanka ayaa dib uga dhacday tartanka Afrika, waxaana hoos u dhac uu ku yimid waxyaabaha ay u dhoofiso Afrika iyo waxyaabaha ay kasoo dhoofsato intii u dhexeysay 2011 -2013. Sidaa daraadeed, Mareykanka ayaa lagu eedeeyay inay ku baraarugtay hadda Afrika oy doonayso inay gaadho Shiinaha iyo Midowga Yurub. Shirkii ugu dambeeyay ee Mareykanka iyo Afrika ayuu Mareykanka ballan ku qaaday inuu ka caawinayo Afrika la dagaalanka Argagicxiska iyo Horumarinta dhaqaale.
Hadaad soo ururiso, Afrika ayaa noqotay qaarad loosoo wada hanqal taagayo oo tartan loogu jiraa sidii looga faa’idaysan lahaa khayraadka dabiiciga ah ee Qaaradda, sida Macdanta, Beeraha, iyo Shidaalka.